Kevin De Bruyne Waa In Uu Naftiisa Ku Tijaabiyaa Liverpool, Real Madrid Ama Barcelona, Wali Koox Wayn Umuu Ciyaarin, Chelsea & Man City Waa Serie B. - Gool24.Net
Kevin De Bruyne Waa In Uu Naftiisa Ku Tijaabiyaa Liverpool, Real Madrid Ama Barcelona, Wali Koox Wayn Umuu Ciyaarin, Chelsea & Man City Waa Serie B.
Khabiirka kubbada cagta England ee Stan Collymore ayaa aaminsan in la soo gaadhay waqtigii uu xidiga kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne tix galin lahaa in uu ku biiro Liverpool, Real Madrid ama uu qayb ka noqdo dib u dhiska Barcelona.
Xidigii hore ee Liverpool ee Stan Collymore ayaa si wayn u amaanay qaab ciyaareedka joogtada ah ee Kevin De Bruyne laakiin waxa uu ku dooday in la soo gaadhay waqtigii uu tijaabin lahaa kooxaha waa wayn ee Liverpool, Real Madrid ama Barcelona.
Kevin De Bruyne ayaa soo qaatay xili ciyaareed cajiib ah wuxuuna ku guulaystay abaal marinta xidigii horyaalka Premier league ugu fiicnaa ee abaal marinta uu maamulka Premier league bixiyo laakiin waxa uu ilaa hadda ku dhibtoonayaa in uu kooxdiisa City kula guulaysto Champions League.
Collymore ayaa Kevin De Bruyne u sheegay in aanu wali wax koox wayn ah u ciyaarin isaga oo Chelsea iyo Man City ku tilmaamay kooxo leh hamiga koox Serie B ah oo kale.
Stan Collymore oo ka hadlaya in Kevin De Bruyne uu ku biiro Real Madrid, Barcelona ama Liverpool ayaa yidhi: “Miyayna ahayn waqtigii uu isagu naftiisa ku tijaabinn lahaa Real Madrid, dib u dhiska Barcelona ama Liverpool?”.
Stan Collymore oo yaraysanaya kooxaha Chelsea iyo Man City ayaa De Bruyne u sheegay in aanu wali koox wayn u ciyaarin wuxuuna yidhi: “De Bruyne wali umuu ciyaarin koox wayn, sababtoo ah Chelsea iyo ManChester City waxay ka yimaadeen filashada heerka B. Wolsburg waa C, Belgium waxay inta badan tahay farashka madow intii uu ahaan lahaa midka hor ordaya”.
“Qaabka kaliya ee uu xaqiiqdii naftiisa ugu shaanbadayn karo in uu halyay ku yahay ciyaaraha waa in uu ku biiro kooxaha filashada A*-ka leh oo uu awoodiisa sare u qaado, ma jiro waqti ka fiican oo uu taas samayn karaa. De Bruyne waxa uu si sax ah ugu haboon yahay Liverpool” ayuu Collymore sharaxaadiisa raaciyay.
Collymore oo sii sharaxaya sida uu Kevin De Bruyne ugu haboon yahay Liverpool ayaa yidhi: “Wuu soo dhex gali karaa oo uu khadka dhexe ordi karaa halkaas oo haddaba leh dhamaan astaamihii uu isaga kaga soo bixi lahaa wixiisa ugu fiicani”.
“Isagu waxa uu xaqiiqdii iyaga ka dhigi karaa koox fiican taas oo koobab badan oo Premier league ah iyo Champions league ah ku guulaysan karta. Waxaan maqli karaa taageerayaasha City oo minco daro ku tilmaamaya, laakiin waxa kaliya ee bilaa micno ahi waa haddii ayna Liveprool hayn maaliyadii ay isaga ugu tagi lahayd”.
Kevin De Bruyne ayaa ka mid ah taageerayasha khaaska ah ee Liverpool wuxuuna Collymore u muuqdaa mid kooxdiisii hore ee Reds u riixaya in ay xidiga reer Belgium la soo saxiixdaan si ay u gaadhaan heer kale oo ay koobab badan oo Premier League iyo Champions League ah ugu guulaysan karaan.
Runtii weeye waa ku raacsanahay City iyo Chelsea waa saan qaad hadda socod baranaya.
Scow sneger says:
Waxa socabtee ma isheegi karta
Sakariye ismaaciil says:
Sheeko xumada aad soo qoraysaan iska daaya